चम्पा नेपाल र सीता राई यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो घरव्यवहार धान्नुसँगै आफू रोजगार बन्न र अरू महिलालाई उद्यमी बनाउन अहोरात्र खट्दै छन् । पछिल्लो समय सहरबजारमा सिलाइबुनाइको पसल सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय शिक्षित र हुनेखाने महिलाहरूलाई बुटिक व्यवसायले पनि आकर्षित गर्दै छ ।
गृहिणी पृष्ठभूमिबाटै जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका कतिपय महिला न आफै स्वरोजगार बन्न चाहेको देखिन्छ न त अरू महिलाका लागि वातावरण बनाउनमा चिन्तित देखिन्छन् । अनेक कठिनाइ झेल्दै उद्यम–व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूको व्यवसायलाई चाहिने थप सल्लाह–सुझाव दिनमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसमेत उदासीन देखिन्छ । तालिम प्रमुख अशोक राई भन्छन्, ‘जनशक्ति अनि थप साधनस्रोतको कमीले सल्लाह दिन र अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।’
हामीकहाँ सिलाइबुनाइ, बुटिक र हस्तकलाको व्यवसायमा मात्र महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ । विकसित मुलुकमा जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यममा महिलाहरूको उपस्थिति नगण्य देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले महिलाहरूको क्षमता पहिचान गरी आवश्यक तालिम दिने गरे यो अपवाद हट्दै जानेछ । प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:३७
के हिजो पार्टीमा देखिएका कमजोरी र खराबी आज एकाएक निमिट्यान्न भए ? ती कमजोरीबारे पार्टीभित्र र बाहिर यी बुद्धिजीवीले कत्तिको बहस गरे वा गरिरहेछन् ?
तर बुद्धिजीवी सामान्य मानिसभन्दा सांस्कृतिक र चेतनाको हिसाबले एक कदम माथि उठ्नुपर्छ । उसले आफैलाई सन्देह गर्नु जरुरी छ । सत्यको खोजी निरन्तरको सन्देहमार्फत हुन्छ । प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरेर साथै आफ्ना पूर्वमान्यतामाथि प्रश्न गरेर मात्र सत्यको बाटो हिंँड्न सकिन्छ । यसका लागि भगत सिंहले बन्दीजीवनमा लेखेको ‘म किन नास्तिक भएँ ?’ लेखको यो भनाइ शिरोधार्य गर्नु जरुरी हुन्छ— ‘आलोचना र स्वतन्क्र विचार त्रान्तिकारीका अपरिहार्य गुण हुन् ।’ सत्यको खोज गर्ने बुद्धिजीवी आफैमा क्रान्तिकारी हो । उसले यी दुई गुणको खोजी गर्नु जरुरी नहोला ?